Xenix, Unix nke Microsoft. | Site na Linux
Xenix, Unix nke Microsoft.
jorgemanjarrezlerma | | GNU / Linux, Ndị ọzọ, Na-atụ aro
Si Microsoft ihe ọ bụla nwere ike iju m ọzọ. Oge gara aga nyocha na nyocha akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ izizi ndị lekwasịrị anya na batrị ha na Linux na Unix, achọpụtara m na Microsoft nwere Unix nke ha.
Dika edere ya na net, enwere ike ikwu na: Microsoft XENIX bu sistemu eji aru oru dika UNIX nke Microsoft meputara ma nye ya na ya enweghi ikike iji aha "UNIX" o kpebiri inye ya aha a.
Na 1979, Microsoft zụtara ikike n'aka ya UNIX sistemụ V AT&T ma kwupụta na August 25, 1980 ebumnuche ya iji gbanwee ya na microprocessors 16-bit mana ọ naghị arụ ọrụ.
Eresighị XENIX ozugbo na onye ọrụ ikpeazụ, mana Microsoft resịrị ndị na-emepụta kọmputa ikikere ndị chọrọ iji ya na kọmputa ha. Mgbanwe mbụ nke XENIX ka emere maka microprocessor Ogbogu Z8001.
Microsoft wepụrụ XENIX mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta iji mekọrịta OS / 2 sistemụ arụmọrụ na IBM. Microsoft kwenyere na SCO iji ree XENIX ikike ya na ya gbanwere 25% nke SCO.
SCO kesara ọdụ ụgbọ mmiri nke XENIX maka ndị nhazi Intel 80286 na 1985. Ntọhapụ a mechara soro ọdụ ụgbọ mmiri maka ndị nhazi Intel 80386, nke a maara dị ka XENIX System V i386.
SCO Unix bụ ụlọ ọrụ kwụsịrị ugbu a ebe ọ bụ na ikpe ọ gbara megide ọtụtụ ụlọ ọrụ (Novell na IBM tumadi) gosipụtara ntaramahụhụ maka ego ya yana mkpebi ya megide ya, a manyere ya ịrịọ maka nchekwa nke iwu enweghị ego nke United States na na August 2012 ọ rịọrọ ka a gafee isi nke 7 nke iwu a kwuru, ya bụ, mgbasa site na enweghị ego.
Amaghị m ihe ị na-eche mana ekele maka onye okike maka enweghị ọhụụ Microsoft; Unix na n'ihi Linux (a free Unix dabeere sistemụ kernel) efehe na chioma dị ka ndị a sistemụ bụ ihe ndị ọzọ ala, a pụrụ ịdabere na nke a larịị nke àgwà na sistemụ arụmọrụ Microsoft nwere ike na-atụ anya.
You nwere ike iche n'echiche ihe gaara eme ma ọ bụrụ na Microsoft ahapụghị ya dị ka ọ mere na OS / 2? Eziokwu naanị na-eche banyere ya na-eme m ọgbụgbọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Xenix, Unix nke Microsoft.
Ihe 29 kwuru, hapụ nke gị
Akwụkwọ ntuziaka nke Isi Iyi dijo
SCO Unix bụ ụlọ ọrụ kwụsịrị ugbu a ebe ọ bụ na ikpe ọ gbara megide ọtụtụ ụlọ ọrụ (Novell na IBM ọkachasị) gosipụtara ntaramahụhụ maka ego ya yana mkpebi ya megide ya, a manyere ya ịrịọ maka nchekwa nke enweghị ego iwu nke United States na na August 2012 ọ rịọrọ ka a gafee isi nke 7 nke iwu a kwuru, ya bụ, mgbasa site na enweghị ego.
Enweghị m ike ichere ịhụ Apple ka ọ na-ata ahụhụ otu ihe a.
Zaghachi Manuel de la Fuente
Ọfọn, chere nọdụ ala! Karịsịa Achọghị m ịma ihe apụl na-eme na mmepe ya! Naanị m maara na m na-eji otu ngwanrọ ngwanrọ. Otu ihe a nwere ike ikwu maka Microsoft.Enweghị m ike ichere ịhụ Microsoft ka ọ na-ata ahụhụ otu ihe a. Ma ebe ọ bụ na achọghị m ịma n'ezie, olee ihe ọzọ ọ dị mkpa!
Zaghachi ka freebsdick
Hahaha, ama m na ọ bụ nrọ dị anya, mana ọ ga-eme otu ụbọchị ma emesịa agaghị m akwụsị ịchị ọchị. xD
nnwere onwe dijo
Apple na-ere oke ọnụ, ngwaahịa elitist, na Apple abụghị na ọ nwere oke ahịa nke ndị ọrụ ịsị, yabụ onye maara ihe akara aka nwere ike ịgba, ndụ na-ejide ọtụtụ ihe ịtụnanya.
Zaghachi nnwere onwe
Otu ebe a, amagoro m ihe banyere Xenix, ozugbo m malitere ịchọ mgbọrọgwụ na ụdị dị iche iche nke Unix, gụnyere Solaris.
Enwere m olileanya na otu ụbọchị Apple ga-aga ọkụ mmụọ ma kwụọ ụgwọ maka ihe ọ na-ewe na FreeBSD, mee ya azụmaahịa, ha anaghị enye onyinye ma ọ bụ weghachite koodu ọ bụla bara uru. X.org, lee nnukwu ihe ……………………………… ..
Ọ bụrụ na ị na-ekwu maka Sco, ọ kabeghị ụzọ, ọ bụ naanị Unxis inc zụtara ya mana a na-echekwa ọrụ ya! Ọ bụrụ na ị na-ekwu maka Xenix, Microsoft bu n'uche inwe patent na Unix. Microsoft ahụtụbeghị ezigbo ohere mmepe na ikpo okwu ahụ !! Achọrọ m naanị iberibe ahịa unix !! lee, m na-etinye saịtị saịtị dị ugbu a http://www.sco.com/
Kedu ka ị mere.
Ka ị na-ekwu, ọ bụ eziokwu na a ka na-enye ọrụ mana ka ha na-ekwu, tupu dịka ọ dị na mbụ na ugbu a (ahịrịokwu nke Indio Cajeme si Northwest Mexico). Ọ bụkwa eziokwu na Microsoft zuru oke (maka iwe onye ọ bụla) yana na ọ raara onwe ya nye na-edepụta ihe ọjọọ nke ụfọdụ atụmatụ Unix na Linux.
Unix bu "Big Daddy" nke sistemu eji aru oru, onye obula ejirila ya gba egwu. Ogologo ndụ Unix.
Enwere m olileanya na ọdịnihu nke Barrelfish akwụsịghị otu. Ọrụ a, nke site n'ụzọ bụ oghere, ga-edozi nsogbu nke ụkpụrụ ụlọ dị iche iche na-arịwanye elu, na ọ gaghị adị njọ ịrara ya otu isiokwu n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ ngwaahịa nke ejiri nkwalite Microsoft kwalite.
Odogwu R4 dijo
OS / 2 dị mma, ntakịrị oge tupu oge ya. M hụrụ otu ìgwè na Xenix, mana ọ bụ ọtụtụ afọ gara aga ka m na-echeta obere.
Zaghachi linuxman R4
Remember na-echeta OS / 2? Ntughari 3 Warp dị elu karịa Windows n'ụzọ ọ bụla, yabụ Microsoft hapụrụ mmekọrịta ya na IBM wee tụba ya na hyp n'ihi na ha maara na ha enweghị ohere imegide ya!
Ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ, enwere mpaghara na-aga n'ihu na-azụlite ma na-akwado OS / 2 4 ma ọ bụ ndụdụ ya.
Iberibe SCO, kwesiri ha ka ha furu efu, patrol trollers ma ọ bụrụ na e nwere ...
Obere "Minosoft" dị na Unix, Linux, OSX, ekwentị na PC na ebe ọ bụla okwu ahụ bịara n'ụwa ga-enwe ọ happụ karịa.
Strategy nke a na kọmputa mogul na-a mpempe achicha!
PS: Echere m na ọ bụrụ na ha ahapụ ya n'okpuru GPL ọ ga-abụ akụkọ ọzọ hehehe he
Ọ dịghị onye na-echeta na UNIX na-efu € 3000.
Amara Linux bụ na anyị nwere OS yiri 3000 € maka n'efu.
Apple ghọtara ogologo oge gara aga na kernel ya bụ FreeBSD
Na m ga-enwe anya ma ọ bụrụ na MS bịara na a nix kernel. Ihe ọzọ bụ, ọ na-eju m anya na ọ mebeghị ya ka ọ belata njedebe ya na ogwe aka ya na ekwentị na mbadamba.
Oge ya nile nwanne na-echeta na microsoft na-enyekwa aka imezi kernel linux ọ bụghị ihe ijuanya na windo 9 na-abịa na kịnel Linux ị maara nke ọma karịa na-enweghị nje na otu ihe gbasara nke ọma nke nlekota na azụ dị ka mgbe niile, naanị ugbu a nje ga-adị obere. ga-abịa na ihe ọhụụ na ha mepụtara kernel ọgbara ọhụrụ nke na-anaghị ekwe ka nje banye, ha ga-ekwukwa na Microsoft agbanweela sistemụ arụmọrụ.
Ọ gaghị eme n'ihi na mgbe ahụ ọtụtụ mmemme ga-ekwekọ na Linux XD
Ọtụtụ inqina na Microsoft ga-enye gị ọnya afọ. Aghọtaghị m ihe kpatara iji chebe GNU / Linux dabere na sistemụ ị ga-ebuso OS ọzọ agha
Onye ọ bụla dị ka ọ dị na ntụpọ ya na omume ọma ya ma enwere ụzọ dị mma iji chebe ihe, karịa ịtụba ihere na ịghagharị na nkata adịghị ọcha, n'ihi na onye ọ bụla, na mgbe m na-ekwu na onye ọ bụla bụ onye ọ bụla nwere uwe ruru unyi na ụfọdụ palomino ọzọ na ha gayumbos.
"You nwere ike iche n'echiche ihe gaara eme ma ọ bụrụ na Microsoft ahapụghị ya dịka ọ mere na OS / 2? Eziokwu nke naanị iche maka ya na-eme m ọgbụgbọ. "
Ihe mebiri m bụ ịgụ okwu a.
Zaghachi na scaamanho
O doro anya na nzuzu "ịgbachitere" GNU / Linux na-awakpo Micro $ shit, bụ nzuzu doro anya n'ihi na GNU / Linux Achọghị ka agbachitere ihe ọ bụla, n'ụzọ megidere, ọ bụ ọkwa ọhụrụ.
Banyere "ịwakpo" Microsoft, echeghị m na ọ bụ otu ahụ, mgbe mmadụ na-ekwu maka pests nke Microsoft ọ bụ n'ihi na isiokwu nke ọ na-ekwu okwu ọjọọ n'ihe metụtara Microsoft na-agbanye afọ ya, isiokwu ndị a dị ọtụtụ ma dịgasị iche dịka onye ọrụ na ahụmịhe ya na ụlọ ọrụ ahụ jọgburu onwe ya na obere erughị eru «sist. arụmọrụ ». Mmadu nwere ike ikwu otutu oge banyere otu mediocre Microsoft bu:
1. mediocre isi teknụzụ
2. omume ụlọ ọrụ emeghe
3. pathetic ahịa ọgwụgwọ
4. Ihe omuma nke: nke mbu ka m na-agba gi ma m na-eme gi ihere, ma ana m agbara gi ego ma ana m apuru gi.
5. usoro inye ikikere
6. unethical azụmahịa omume, na a kacha nta: urenọ ná Ntụkwasị Obi buut?
Enwere m ike ịga n'ihu ruo ọtụtụ awa na awa.
O doro anya na ebe a bụ naanị onye na-enweghị echiche nzuzu nke ihe Microsoft ma ọ bụ Windows bụ ma ọ bụ ihe ha na-anọchite anya gị, mana na naanị ịkpọtụrụ ya, ị ga-agbapụta bile site na pores niile dịka ndị ọrụ GNU / Linux ndị ọzọ. na ị wakporo.
Enwere ọtụtụ ihe na - eme m ka m daa ahihia, mana n'etiti ha enweghị sistemụ arụmọrụ, ana m edebe nke ahụ maka ndị na - enweghị ndụ onwe ha ma gbaba n'ime usoro. na-arụ ọrụ iji nwee mmetụta nke ihe.
Maka m sistemụ arụmọrụ bụ ihe m na-eji arụ ọrụ m kwa ụbọchị, anaghị m enwe mmetụta ma ọ bụ ịkpọasị nye onye ọ bụla, ana m eji ha dịka njirimara ha, ohere, mkpa na nnweta nke oge a. Ihe ụlọ ọrụ ndị ahụ na-eme n’azụ OS nwere ike ịdị m ka nke ka mma ma ọ bụ ka njọ karịa, na abanyeghị m inyocha ha.
Site n'ụzọ, ị nwere ike ịkọwapụta akụkụ nke nkọwa m m na-awakpo ndị ọrụ GNU / Linux ndị ọzọ dịka ị si kwuo? Ọ bụ ya mere na-awakpo onwe m? Kedu akụkụ dị mkpa nke ịbụ onye m wakpoo? Can nwere ike i nweghi "iberibe echiche" nke imata ka esi agu ma adighi anwu anwu?
“Enwere ọtụtụ ihe na - eme m ka m ghara ịwụfu mmiri, mana n'etiti ha enweghị sistemụ arụmọrụ, ana m edebe nke ahụ maka ndị na - enweghị ndụ onwe ha ma gbaba n'ime usoro. na-arụ ọrụ iji nwee obi ụtọ na ihe »
Ọ bụrụ na ị na-ekwu ya maka m na ị bụ ezighi ezi nwanne, nanị na IT bụ ikuku m na-eku ume kwa ụbọchị ebe: a) M na-enwe ya dị ka ntụrụndụ ho b) Enwere m obi ụtọ ibi na ya c) ya mere enwere m obi ụtọ ibi ihe masiri m d) dika obu ihe masiri m na ihe m n’aruru oru na oh! Ohere! ndị otu m raara onwe ha nye IT, sistemụ arụmọrụ na teknụzụ ndị ọzọ bụ isiokwu anyị na-akparịta ụka kwa ụbọchị =)
"Nye m sistemụ arụmọrụ bụ ihe m na-eji arụ ọrụ m kwa ụbọchị, anaghị m enwe mgbakwunye ma ọ bụ ịkpọasị nye onye ọ bụla, naanị m na-eji ha dịka njirimara ha, ohere, mkpa na nnweta nke oge a."
N'ezie, n'ihi na ị bụ onye ọrụ njedebe nke teknụzụ nke ị na-aghọtaghị na o doro anya na ịnweghị mmasị ịghọta, o zuola gị ịnọ na ebere ha.
"Ihe ụlọ ọrụ ndị ahụ na-eme n'azụ OS ndị ahụ nwere ike ịdị m ka nke ka mma ma ọ bụ ka njọ karịa, na abịabeghị m iji ha kpọrọ ihe."
O yiri ka o kwesiri inweta aha nke opinologist - enwere ihe ozo di iche!
Iji mee ka a uru ikpe banyere ihe i nwere mara ya na ị na o doro anya na-amaghị -na a otutu- banyere isiokwu.
Dịka ọmụmaatụ: ị ​​naghị eche banyere OS ma ọ bụ ụlọ ọrụ, naanị ị chọrọ iji ngwaahịa ụfọdụ maka otu ebumnuche ... nke ọma, nke a na-anabata, ọ bụ ihe kwere nghọta na nke ọma, ọ bụghị mmadụ niile na-adabere n'akụkụ ọrụ ahụ. nke ihe ma ọ bụ, ka mma, ịghọta ihe kpatara ihe ji arụ ọrụ na otu ha si arụ ọrụ - na site na mgbe ahụ gbanwee, melite, wdg.
Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ị naghị arụ ọrụ ahụ, ị ​​kwesịrị izere ịme mkpebi bara uru ma zere nzuzu na okwu nzuzu dị ka nke ị mere na nke m zara.
Gịnị kpatara nzuzu na mediocre? Ọ dị mma, n'ihi na onye na-amaghị ihe ha na-ekwu na-ekwu ha ma ka na-eche echiche ha, ihe ma ọ bụ ihe ha na-ekwu bara uru.
Rịba ama, onye m hụrụ n'anya na-agbazi mgbazi, onye na-agbachitere ndị ogbenye na ndị na-anọghị ya, gụọ ihe ndị a ga - enyere gị aka ịmegharị gị:
Microsoft na-anwa imebi weebụ ya na ihe nchọgharị Explorerntanetị Internet Explorer. Enwere ihe a na-akpọ World Web Consortium (w3c.org) na ruo ọtụtụ afọ ọ na-arụ ọrụ iji mepụta ọkọlọtọ weebụ ka ndị mmepe niile nwee usoro ọrụ aka ọrụ yana ihe niile a na-arụ ọrụ nke ọma ndị ọkachamara na ndị ọkachamara. Ahụmịhe ikpeazụ kachasị mma maka onye ọrụ, naanị taa anyị nwere ike ịsị na ọ nwetala mmeri ụfọdụ na atumatu ọjọọ nke Microsoft (ụlọ ọrụ ị na-agbachitere n'ihi na ị maghị ihe ị na-ekwu) ekele, na oke, nkwado nke ntọala Mozilla.
Olee otu Mozilla si nyere aka? Site n'ime ka Microsoft kwụsị ịnwa iji ihe nchọgharị weebụ gị mebie weebụ.
Kedu ihe anyị na-akpọ ịkụji weebụ? N'ihi na Microsoft emejuputara ruo ọtụtụ afọ (ọbụlagodi site na IE6 ruo IE8 gụnyere) usoro malformations na teknụzụ teknụzụ nke mere na ndị mmepe ga-emegharị weebụsaịtị anyị iji rụọ ọrụ na ihe nchọgharị ndị a, na-agbagha ndakọrịta na ihe nchọgharị ndị ọzọ nke ahịa na-esote n'efu ụkpụrụ na mmejuputa usoro nke mere ka webụsaịtị rụọ ọrụ nke ọma naanị na ihe nchọgharị Microsoft yana na n'ime ihe nchọgharị ndị ọzọ ha na-arụ ọrụ na-adịghị mma ma ọ bụ na ikike nwere oke: ihe Microsoft chọrọ bụ iwepụ asọmpi site n'ịchọ imechi weebụ naanị na ihe nchọgharị gị na, na ọtụtụ mgbe, ọ dabere fọrọ nke nta ka naanị gị ngwa na-enwe ike ịmepụta weebụ na-agba ọsọ na ihe nchọgharị gị na ... n'ihu?
Ọ bụghị naanị na Microsoft gbalịrị imechi weebụ maka ojiji nke aka ya - cheta na taa a na-ewere web dị ka ihe nketa ọdịbendị nke ụmụ mmadụ - mana ọ gbalịkwara n'ụzọ niile iji zere ịmepụta usoro akwụkwọ n'efu maka mgbanwe data n'efu.
A bit nke akụkọ ihe mere eme: ruo mgbe na-adịghị anya gara aga ngwaahịa Microsoft na-arụ ọrụ akpaaka bụ de facto ọkọlọtọ ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ enweghị uru nke MS nwere nke usoro arụnyere ma yabụ ọ kachasị elu ụwa niile ... nke ọma, mgbe ọtụtụ mba Europe, ndị ndu ya Germany, Switzerland, France na Belgium kpebiri na ha enweghị ike ịdabere na teknụzụ na ụlọ ọrụ America maka akwụkwọ kọmputa ha chọrọ, ha na-amalite ịmalite atụmatụ iji mepụta usoro ederede n'efu na nke ụwa niile, karịa eze niile enweghị ụdị ọ bụla, maka mgbanwe ahụ nke ozi, usoro nke onye obula choro imeputa akwukwo di iche iche.
N'ezie, mkpu ahụ dị na mbara igwe sitere na Microsoft ozugbo, onye hụrụ ozugbo oke ahịa ahịa nke Office ha na-efunahụ n'ihi na, ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ụzọ ọzọ iji mepụta ma gbanwee akwụkwọ, onye ọ bụla nwere ike iji usoro a n'efu, na-akpaghị aka onye ọ bụla ga-akwụsị ịdabere na ngwaahịa ha 🙂
Ogologo akụkọ dị mkpirikpi: dịka ha gbalịrị imebi echiche nke usoro akwụkwọ n'efu maka ọtụtụ afọ, taa enwere LibreOffice, nke na-egosi na ndị mmadụ n'otu nwere ike ime karịa ụlọ ọrụ na-adịghị mma dịka Microsoft.
Otu ozi ikpeazụ: mgbe Microsoft kwupụtara ọkwa nchebe ọhụrụ nke etinyere na sistemụ Vista ya, nke mere ka antivirius na antimalware software bụrụ ihe na-enweghị isi, ụlọ ọrụ ahụ tiri mkpu na mbara igwe na-arụ ụka na Microsoft na-ebibi akụkụ dị mkpa nke ọrụ yana na, ọ bụrụ na ọ mere nke ahụ , ọtụtụ puku mmadụ ga-enweghị ọrụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nche ga-emechi (onye kachasị aghụghọ bụ Agnitum, ụlọ ọrụ Russia nke kere Agnitum Outpost).
Nzaghachi nke Microsoft, kama ịsị, "Gumụ okorobịa, antimalware jupụtara niche na-efu n'oge ahụ, ọ bara uru taa" bụ "Oops, gbaghara m!" ọ kpachaara anya họrọ iji mee ka sọftụwia ya enweghị ntụkwasị obi !!! Chei onye ọrụ !!! Nke ahụ bụ ọhụụ Microsoft.
O doro anya na ị maghị nke a, ị nweghị echiche nzuzu, bah, n'ihi na dị ka ị na-ekwu, naanị ihe ị na-eche bụ ịgbanye igwe, jiri ya ma gbanyụọ ya, nke m kwughachiri adịghị njọ, mana ebe ọ bụ na ị naghị mara ọtụtụ ihe, ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ imechi ortho mgbe ị na-amaghị ihe ị na-ekwu.
"Site n'ụzọ, ị nwere ike ịkọwapụta akụkụ nke nkọwa m m na-awakpo ndị ọrụ GNU / Linux ndị ọzọ dịka ị si kwuo?"
Ee, n'ezie, ị bụ ọkara jerk, nri?
"Ihe mere m ji nwee ọgbụgbọ n'ezie bụ ịgụ okwu a."
Ihe akpụkpọ ahụ na-ekwu bụ eziokwu: belụsọ n'oge ụfọdụ ihe Microsoft na-egwuri egwu na-eme ihere mana n'ezie, onye amamihe dịka ị na-amaghị nke ahụ, ihe ngọpụ ya bụ igosipụta amaghị ekwupụta ya.
Ọ bụ ya mere na-awakpo onwe m? Kedu akụkụ dị mkpa nke ịbụ onye m wakpoo? Ndị Taliban nwere ike ịgụ ihe karịrị ihe akụkụ Akwụkwọ Nsọ ha kwuru, ọ nwere ike ghara inwe "echiche nzuzu" nke ịmara etu esi agụ ma ghara ịnwa ịnwa? »
Dị ka ịchọrọ ị dị ndụ, ihe abụọ doro anya:
1. are bu ezigbo nnabata nke na-ekwusi okwu ike.
2. are bu ezigbo nnabata nke na-ekwusi okwu ike.
Echekwala na nke ị na-amaghị. Kedu ihe ị ga-ama maka ihe m na-eji ma ọ bụ kwụsị iji sistemụ arụmọrụ dị iche iche na ihe m maara ma ọ bụ kwụsị ịma banyere ha.
Aga m azaghachi mbuso agha / mkparị niile gị, mana ị na-eme onwe gị ka ị ghara ịkwado onwe gị ka o wee ghara ịla oge n'iyi.
Anaghị m agwa gị ihe ọ bụla, mana m na-agwa gị ihe niile ma ọ bụ ọ bụrụ na ị masịrị, agaghị m enye gị ọka wit maka akpọghị gị rodrigo.
msx biko, enweghị iwe ma ọ bụ nye ụdị njirisi nke ụdị ahụ.
Onye ọ bụla nwere arụmụka ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka a sọpụrụ nke gị, ị ga-asọpụrụ ndị nke ọzọ.
Biko nyere aka dobe saịtị ahụ ka ọ dịrị 😉
Ndo KZ, i dighi nma, ogaghi eme ozo.
Daalụ maka ma nghọta, karịsịa ka saamanho n'ihi na enwekwaghị m jụụ 🙂
msx ị na-eche n'ụlọ, n'ụzọ nkịtị dị ka nke a ... na n'ụlọ, mgbe onye ọbịa bịara ma na-ekerịta echiche gị, nke ọma, ị naghị akparị ya, ị? haha 😉
Ndị dị ka gị na esemokwu a na-ahụkarị nke "M gbanye PC, jiri ihe m chọrọ ma gbanyụọ ya" abụrụla ihe mgbochi na ndị mbibi nke Mgbakọ. Mgbe onye ọrụ nọ n’okpuru ụlọ ọrụ na-achọghị ịma ihe ọ bụla n’ihi na ọ na-enye ya ihe ọ chọrọ, ọgụ ọgụ nke ndị na-achọ ihe ziri ezi dị mgbagwoju anya.
Ọtụtụ ihe ị na-eji ma na-ahụ n'oge ọ bụla dịka ịnweta weebụsaịtị ọ bụla na ihe nchọgharị ọ bụla ma ọ bụ ikike ngwanrọ na-enweghị onwe ka e wuru na-eche echiche dị ka nke gị.
Ọ dị mma mgbe niile ịmara ebe ihe niile si ma ọ bụrụ na ọ bụ maka ụlọ ọrụ dịka Microsoft taa a gaghị enwe ịntanetị ma ị gaghị ekwu maka nke a, ebe ọ bụ na Bill Gates gbachitere ojiji nke PC na mpaghara, maka multimedia na ngwa, nke ọ ọbụna dere akwụkwọ na-emecha loro. Ana m egosi mmadụ !! Dịka ọmụmaatụ, Achọghị m ịma ịzụ akpụkpọ ụkwụ Nike na m maara na ha sitere na nrigbu nke ụmụaka dara ogbenye n'ihi na ha dị mma ma na-egbo mkpa m.
Zaghachi ka kikee
Ọgwụgwụ nke mbipụta ma ọ bụ mbipụta nke isiokwu a n'akụkụ nke m, nwere njedebe ụfọdụ ihe dịka:
1.-Mee ka o doo anya na agbanyeghị usoro iwu ya na usoro azụmahịa ya, Microsoft bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na ngalaba nke teknụzụ ozi.
2.-Gini kpatara ochichi Microsoft na PC ahia na enweta ihe kari ndi amara nke ndi Apple mere ya n’oge di nkpa (oge 90), nke mere ka njikwa na mkpocha nke ire PC nwere nani otu egwuregwu: Microsoft.
3.-Ọ bụ maka icheta mmalite nke ụlọ ọrụ a, ọtụtụ n'ime unu emetụghị ha aka (n'ihi na ọtụtụ ma ọ bụ ụfọdụ amụrụ na mmalite 90's na 80's). Ebumnuche nke akụkọ ihe mere eme iji dekọọ ihe ndị mere na mmepeanya anyị, ya mere, ha bụ ihe edeturu na kwesịrị (kwesiri) iji gbochie ịmehie otu ihe ahụ gara aga.
Na njedebe nke 80s na mmalite 90s, ụwa nke PC dị iche na taa na ọtụtụ ihe taa anyị na-ewere dị ka naanị ndị ọkachamara na ndị mmadụ nwere ikike iji nweta ya na ụwa PC nke ụmụ mmadụ efu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịnye asụsụ ntụgharị ebe ọ na-enweghị ikike ịkọwapụta nke ọ nwere taa.
Ka o sina dị, dị ka post banyere Bill Gates nke m mere ụbọchị ole na ole gara aga, ọ bụ maka ịtụgharị uche ihe kpatara ọtụtụ ihe. OpenSource ụwa nwere ezigbo agwa ọma na otu n'ime ha bụ nnwere onwe, mana oge ụfọdụ ngọzi a na-aghọ ihe ihere n'ihi ọkwa ekweghị ibe nọrọ nke dị.
Elav na ọtụtụ ndị ọzọ ezigala na blọọgụ dị iche iche na saịtị pụrụ iche ihe kpatara Linux enweghị ka ọ gwụchara ma, site n'echiche m (anya m) esemokwu, nkewa na ekweghị ibe nọrọ na karịa enweghị ọkọlọtọ na usoro na-eme Linux enweghị ike dị mkpa, na-ekwu okwu azụmahịa, bụrụ asọmpi megide Microsoft na Apple karịa ihe niile.
Echere m na Cannonical na-arụ ọrụ iji pụọ na ụdị echiche a site n'ịgbalị igwu gị maka gị megide ibu abụọ ndị a (ọbụlagodi Novell na SUSE na IBM), enwere olile anya na ha ga-aga nke ọma n'ihi na nke a ga-ekwe ka ndị ọzọ kesaa gosipụta omume ọma ha. ma nwee ikike ịsọ mpi n’ihu ọha.
Abụwo m onye ọrụ Linux kemgbe mmalite nke narị afọ a (21st ma ọ bụ XNUMXst) na eziokwu iji bụrụ eziokwu, anaghị m atụ uche Microsoft ma ọ bụ Apple ma ọlị ebe m nwere ihe niile m chọrọ maka ọrụ m, ọbụlagodi na-egosipụta Windows ma ọ bụ MacOS na igbo mkpa nke ndi ahia m.
na mụ onwe m, onye ka dị ndụ ...:
Nkwado cd-rom ọfụma abịabeghị, mmadụ ọ nwere ike inye m aka wee dee ya? 😉
Max ígwè dijo
Na ihe ọ bụla Microsoft na-asọ oyi ụfọdụ na-eme m nzuzu (ana m ekwu ya na nkwanye ùgwù zuru oke), ọkachasị n'okwu a na anyị agaghị ama ihe ga - eme, ma eleghị anya ọ ga - abụ ezigbo ngwaahịa ma ọ bụ ikekwe ọ bụghị, na ọ bụghị ihe niile Microsoft dị njọ, ọtụtụ n’ime anyị na-amalitekwa ihe na ha.
Site n'ụzọ, echere m na ejiri m n'aka na enwere ụdị Internet Explorer maka Unix ọtụtụ afọ gara aga (IE na-arahụ arahụ, ọbụnadị ụdị ndị kachasị ọhụrụ ka mma).
Zaghachi Max Steel
Nọgide Na-echekwa: Linux Foundation to Rescue.
Na-enyere aka ịhọrọ akara ngosi LibreOffice site na iji nyocha